Amiir Harry iyo Meghan ayaa dacwad ka gudbiyey sawir qaadayaasha eryada dadka caanka ah… – Hagaag.com
Posted on 29 Luulyo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan, ayaa dacwad ka gudbiyay magaalada California iyagoo ka dhan ah sawir qaadeyaasha aalaaba eryada dadka caanka ah, iyagoo ku eedeeyay inay qaateen sawirada wiilkooda Archie si sharci daro ah.
Dacwaddan, oo la horkeenay Maxkamadda Sare ee Gobolka California ee ku taal degmada Los Angeles, ayaa tilmaameysa “xadgudubyo taxane ah” oo ka dhashay khusuusiyaadka ilmahan yar ee 14 bil jirka ah.
Bayaan uu soo saaray qareenka wiilka boqorada ayeeyada u tahay iyo xaaskiisa ayaa xusay in “Duke and Duchess of Sussex ay gudbinayaan dacwadan si ay u ilaaliyaan xaaladaha gaarka ah ama khusuusiyaadka ilmahooda oo jooga gurigooda iyada oo aan la horkeenin sawir qaadayaasha, iyo in la kashifo lagana hortago kuwa doonaya inay ka faa’iidaystaan ama wax ka helaan ​​falalkan sharci-darrada ah,” .
dacwadu waxay kaloo sheegtey in diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo kuwa helikobtarrada ah ay ku kor duuleen guriga lammaanaha iyagoo ku xadgudbay arrimaha gaarka ah.
Dacwaddan ayaa sheegtay in lammaanaha aysan dooneynin in si gaar ah loola macaamilo waxayna kaliya dalbadeen xuquuqda gaarka ah ee gurigooda sida uu dammaanad qaadayo sharciyada California.
Harry iyo Meghan Markle waxay ku noolyihiin Los Angeles kadib markii ay ka tanaasuleen waajibaadkoodii dhinaca boqortooyada dhamaadkii bishii Marso ee lasoo dhaafay, waxayna u dhaqaaqeen inay ku noolaadaan meel ka baxsan Ingiriiska kadib markii ay isku khilaafeen warbaahinta sababo la xiriira ee ku talax taga noloshooda gaarka ah.